पहुँचता वेब उपकरणले तपाइँको विकासको लागि अधिक पहुँचयोग्य बनाउँदछ
मलाई १ मिनेट दिनुहोस्, म तपाईंलाई आजीवन बृद्धि दिनेछु, एक प्रयोग गर्नुहोस्.
पहुँच उपकरणको FAQ
सरकारी वेबसाइटहरु द्वारा स्वीकृत
सरकारहरूका लागि सुरक्षित कोड
प्रमाणपत्र होस्ट गर्न सुरक्षित
किन यो तपाईंको व्यापार र पैसाको लागि महत्वपूर्ण छ?
व्यापार गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्
पहुँच वेब उपकरणले तपाइँको विकासको लागि अधिक पहुँचयोग्य बनाउँदछ
तपाईंको व्यापार वृद्धिको लागि But बटनहरूको जादू हेर्नुहोस्। मलाई १ मिनेट दिनुहोस्, म तपाईंलाई आजीवन विकास दिनेछु, एक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं, गुगल, माइक्रोसफ्ट, फेसबुक, सरकारहरू, आदि। विश्वमा बढ्दो वृद्धिको लागि यो नयाँ प्रविधी प्रयोग गर्नुपर्दछ
हाम्रो संसारमा विभिन्न भाषाहरू छन्, सार्वजनिक स्वास्थ्यको विभिन्न अवस्थाहरू। डोमेन नामका अक्षरहरू एक अर्काबाट टाढा छन्। त्यसो भए, billion अरब मानिस सजिलै वेबसाइट नाम टाइप गर्न सक्दैनन्। यदि एक व्यक्तिले तपाइँको वेबसाइट खोल्न सक्दैन भने उसले वा उनीले लाभ लिन सक्दैनन्।
प्रयोग गर्नुहोस्: -
WebAccessibilityTool.com वेबसाइट खोल्नुहोस् किनकि यो वेबसाइटले यो उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ।
Atoall.com "A" को आईकन हेर्नुहोस्।
WebAccessibilityTool.com एक ठूलो वेबसाईट हो, यदि यो पूर्ण रूपमा खोलिएको छ भने नयाँ ट्याब खोल्नुहोस्।
नयाँ ट्याब ppooii.com वा llkkjj.com मा थिच्नुहोस्। यो एक अद्वितीय उपकरण हो।
तपाईं WebAccessibilityTool.com फेरि देख्नुहुनेछ र अचम्मित हुनुहुनेछ।
यो विकल्प प्रयोग गर्न सजिलो तपाईं आफ्नो वेबसाइट को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो कोड Atoall.com बाट प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा टाँस्नुहोस् त्यसो भए यसले कार्य गर्दछ।
सबैभन्दा ठूलो सरकारी र शैक्षिक वेबसाइटहरू यसलाई प्रयोग गर्दैछ।
तपाईलाई यो सबै थाहा हुनु पर्छ कि तपाईको डोमेन नेम १ भाषामा छ, २०० भाषाहरूको विश्वमा.
तपाईंको व्यापार बढाउनुहोस्, एक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको वेबसाइटहरूमा अब Atoall.com को वेब पहुँच उपकरण पेस्ट गर्नुहोस्।
यसले फरक पार्दैन कि तपाइँको वेबसाइट सानो वा ठूलो छ जस्तै बिंग, गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, याहू, बाउडु, एप्पल आदि।
ठूला सरकारी वेबसाइटहरूले फाइदा लिइरहेका छन्।
तपाईंले आफ्नो जीवनकालको विकासको लागि अनौंठो प्रविधी उपकरणको १० लाभहरू जान्नु आवश्यक छ। एउटा प्रयोग गर्नुहोस्।
वेबसाइटको पहुँचमा तपाईले १ चरण अगाडि बढाउछ।
महान सरकारी वेबसाइटहरूले नयाँ टेकबाट उत्तम फाइदाहरू पाइरहेका छन्.
यसले तपाईंलाई विश्वमा १ अरब अक्षमको लागि पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
यसले तपाईंलाई विश्वमा २ अरब क्षेत्रीय व्यक्तिहरूका लागि अनुकूल बनाउँदछ।
यसले तपाईलाई संसारका २०० भाषाहरुका लागि सजिलो बनाउँदछ।
यो times पटक सजिलो छ सबै डोमेनहरूबाट टाइप गर्न जुन सबैका लागि उपयोगी छ।
यसले तपाइँलाई विश्वमा लाखौं मांसपेशि डिस्ट्रॉफीको लागि उपलब्ध गराउँदछ।
यसले तपाईंलाई १ अरब सरल गुणवत्ता मोबाइल, कम्प्युटर, नेट स्पीड होल्डरहरूको लागि खोल्दछ।
यसले तपाईलाई विश्वमा १ अरब बृद्धि गर्ने मानिसका लागि अझ बढी पहुँच योग्य बनाउँदछ।
यसले तपाईलाई बनाउँदछ, जीवनभर संसारमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि खुल्ला.
पहिलो! कृपया तपाईले एक प्रयोग गर्नु पर्छ। यो असक्षमता भएका अरब प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक पहुँच उपकरण हो, २ अरब क्षेत्रीय मानिसहरूका लागि भाषा उपकरण, आम जनताको लागि सहज पहुँच.
वेब सामग्री पहुँच मार्गनिर्देशन WCGA सरकार दिशानिर्देशहरू, मानव अधिकार, भाषा अधिकारहरू, पहुँच अधिकारहरूको कारणले हुनुपर्दछ। नेट सर्फिंगको लागि निराशाको आँसु रोक्नुहोस्। त्यसकारण सरकारी वेबसाइटहरूले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्.
प्रयोगकर्ताहरूले अर्को शुद्ध प्रयोगकर्ताको सहायताले एकपटक मात्र वेबपृष्ठ पाउनेछ।
त्यस पछि नयाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले वेब साइटहरू सजिलैसँग खोल्न सक्दछ अनौंठो वेब उपकरणको साथ, आफ्नै हातले र फेरि। फेरी अब ऊ वा उनी कुनै पनि मद्दत बिना उही वेबसाइट सर्फ गर्न सक्छन्।
यदि बटनहरू लाइनमा छन् भने ती टाइप गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, उदाहरणका लागि, ppooii.com, llkkjj.com, इत्यादि थम्बको सहायताले, पहिलो औंला, कुनै औंलाले, कुनै पनि स्टिकको साथ, कुहिनिको साथ, नाडी, खुट्टा, खुट्टाको औंठा, इत्यादि सहित।
तिनीहरू ठेगाना बारमा टाइप गर्दछ ppooii Ctrl + Enter, साइट खुल्नेछ वा ooiiuu.com, आदि। (कुनै पनि butt बटनहरू , दायाँ देखि बाँया, दुई पटक.)
सफलताको लागि वेब पहुँच उपकरण उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने?
मलाई १० मिनेट दिनुहोस् म तपाईंलाई सफलतामा हीरा दिन्छु।
तपाईंले अब अद्वितीय टेकको अभ्यास गर्नु पर्छ।
AtoAll मा खोल्नुहोस्। com तपाईंको ब्राउजरमा।
अद्वितीयमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् कोड , बहु आकारबाट छनौट गर्नुहोस्।
अब शरीरको ट्याग वा सेटि inहरूमा तपाईंको वेबसाइटमा नयाँ कोडमा टाँस्नुहोस्।
अब सर्वरमा नयाँ कोडमा अपलोड गर्नुहोस्। र बधाई।
महान! त्यो हो, अब तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा टेक जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्राउजरमा तपाईंको वेबसाइट खोल्नुहोस्।
अब ब्राउजरको नयाँ ट्याब खोल्नुहोस्।
नयाँ उपकरण ppooii.com मा ठेगाना बारमा टाइप गर्नुहोस्। तपाईं खुसी हुनुहुनेछ।
तपाई ठेगाना पट्टीमा कुनै पनि keys कुञ्जी दुई पटक टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि ooiiuu.com वा llkkjj.com वा mmnnbb.com।
यी keys कुञ्जीहरू हुन्। टाइप गर्न सजिलो र सरल किबोर्डमा लाइनमा।
बधाई! तपाईंको उत्कृष्ट वेबसाइट नयाँ टेकको साथ खुला हुनेछ।
उपकरणको 17 कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू जुन तपाईंलाई विकासको लागि सजिलो बनाउँदछ
तपाईंको मनपर्ने आकार र आकार छनौट गर्नुहोस्। कुनै कोड सम्पादन नगर्नुहोस्। रेजिष्ट्रेसनको लागि तपाईंको वेबसाइटमा टाँस्नुहोस्.
तपाईंको वेबसाइटमा तलको कोड प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्.
नमूना 32x32 px
विकासको लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
सुधारको लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
क्षमताको लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
नमूना 64x64 px
कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्, वेबसाइटको लागि
व्यवसायका लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
ग्राहकहरूको लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
नमूना 128x128 px
व्यक्तिको लागि कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
कोडमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्, पैसा बढाउनुहोस्
यसलाई तपाईंको वेबसाईटमा टाँस्नुहोस् नि: शुल्क र बढ्नका लागि
यसलाई बाहेक कोहीले बुझ्न सक्दैन प्रयोग, किनकि यो अद्वितीय टेक हो, र प्रयोग गर्ने तरिका फरक छ, एक प्रयोग महत्वपूर्ण छ.
रेजिष्ट्रेसनको आवश्यक छैन सम्पर्क️ A+ A-
ई-मेल वा तपाईंको ग्रोथमा +91.9356208938 मा कल गर्नुहोस्